Inqubomgomo Yobumfihlo - Best Forex EA's | Abacebisi Abachwepheshe | Ama-Robots ama-FX
(Isebenza njenge-02 / 05 / 2018)
Siyakwamukela "BONKE BAHLE I-EAE | IZIQINISEKISO ZESIVIVINYO | I-FX ROBOTS ” iwebhusayithi (BESTFOREXEAS) enikeza abasebenzisi indawo yokuthembela yokuthola indawo ephelele kanye nabathengisi ukwenza umcimbi wakho ube yisikhumbuzo. Inqubomgomo Yobumfihlo elandelayo isebenza uma ubheka noma usebenzisa iwebhusayithi noma amasevisi nge https://www.bestforexeas.com
Sicela uzame ukubukeza ngokulandela imiyalelo elandelayo. Ngokufinyelela noma ukusebenzisa i-platform ye-BESTFOREXEAS noma amasevisi, ubonisa isivumelwano sakho kule Nqubomgomo Yobumfihlo. Uma ungavumelani nale Migomo, ngeke ukwazi ukufinyelela iwebhusayithi yethu noma usebenzise i-platform ye-BESTFOREXEAS noma amasevisi.
Lesi isaziso sobumfihlo se-BESTFOREXEAS. Kulombhalo, u "thina", "wethu", noma "thina" ubhekise ku-BESTFOREXEAS.
Singabantu "BAHLE BENZA I-EAE | IZIQINISEKISO ZESIVIVINYO | I-FX ROBOTS ”, yenza ibhizinisi njenge-BESTFOREXEAS.COM.
Ihhovisi lethu elibhalisiwe li-9001 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90210, United States of America.
Lesi isaziso sokukwazisa ngenqubomgomo ye-BESTFOREXEAS mayelana nayo yonke imininingwane esiyibhala ngawe. Ibeka izimo lapho singacubungula khona noma yiluphi ulwazi esikuqoqa kuwe, noma ukuthi usihlinzeka. Ihlanganisa ulwazi olukwazi ukukukhomba ("ulwazi lomuntu siqu") nolwazi olungenakukwazi. Ngomongo womthetho kanye nalesi saziso, "inqubo" kusho ukuqoqa, ukugcina, ukudlulisa, ukusebenzisa noma ukwenza okuthile ngolwazi.
BESTFOREXEAS uzisole ukuthi uma kukhona amaphuzu owodwa noma ngaphezulu ongathokozile, okuwukuphela kokusebenza kwakho ukushiya iwebhusayithi yethu ngokushesha.
I-BESTFOREXEAS ithatha ngokungathí sina ukuvikelwa kobumfihlo bakho nokuyimfihlo. I-BESTFOREXEAS iyaqonda ukuthi bonke abavakashela iwebhusayithi yethu banelungelo lokukwazi ukuthi idatha yabo siqu ngeke isetshenziswe nganoma iyiphi injongo engalindelekile kubo, futhi ngeke iwele ngezandla zomuntu wesithathu.
I-BESTFOREXEAS yenza ukulondoloza imfihlo yolwazi lonke olusinikeza lona, ​​futhi sithemba ukuthi uzobuyisela kabusha.
Inqubomgomo yethu ihambisana nomthetho wase-US, ne-UK ngokusemthethweni ukusebenza, kufaka phakathi okudingekayo yi-EU General Data Protection Regulation (GDPR).
Umthetho udinga ukuthi sikutshele ngamalungelo akho nezibopho zethu kuwe mayelana nokucubungula nokulawula idatha yakho yomuntu siqu. Ama-Bestforexas enza lokhu manje, ngokucela ukuthi ufunde ulwazi olunikeziwe http://www.knowyourprivacyrights.org
Ngaphandle kokuthi kuboniswe ngezansi, asihlanganyeli, noma sithengise, noma sitshele umuntu wesithathu, noma yiluphi ulwazi oluqoqwe ngewebhusayithi yethu.
IZINHLOBO ESISEBENZISWA NGAYO NGOKWENZA NGAKHO
Umthetho udinga ukuba sinqume ukuthi yiziphi eziyisisekelo eziyisithupha ezichazweyo esizicubungula imikhakha ehlukene yolwazi lwakho lomuntu siqu, nokukwazisa ngesisekelo sigaba ngasinye.
Uma isisekelo esicubungula ulwazi lwakho lomuntu siqu asisekho futhi sizoyeka ngokushesha ukucubungula idatha yakho.
Uma isisekelo sishintsha ngaleso sikhathi uma sidingeka umthetho BESTFOREXEAS sizokukwazisa ngenguquko kanye nanoma yisiphi isisekelo esisha esinqume ukuthi singaqhubeka nokucubungula ulwazi lwakho.
ULWAZI SIPHUMELA NJENGOBA SINOKUBA NOKUBHALWA KWEZINDABA NAKHO
Uma udala i-akhawunti kwi-website ye-BESTFOREXEAS, uthenge umkhiqizo noma isevisi evela kithi, noma ngokuvumelana nemibandela nemibandela yethu, inkontileka yenziwa phakathi kwakho nathi.
Ukuze sifeze izibopho zethu ngaphansi kwalesi sikweletu kumele sicubungula ulwazi osinikeza lona. Olunye lolu lwazi lungaba ulwazi lomuntu siqu.
Qinisekisa ubunikazi bakho ngezinhloso zokuphepha
Thengisa imikhiqizo kuwe
Ukunikezela ngezinsizakalo zethu
Ukunikeza ngeziphakamiso nezeluleko kumikhiqizo, amasevisi nokuthi ungathola kanjani okuningi ngokusebenzisa iwebhusayithi yethu
I-BESTFOREXEAS inqubo yokwenza lolu lwazi ngesisekelo esinesivumelwano phakathi kwethu, noma ukuthi ucele ukuthi sisebenzise ulwazi ngaphambi kokuba singene enkontileka yomthetho.
Ukwengeza, singahlanganisa lolu lwazi ngendlela ejwayelekile futhi silisebenzise ukuhlinzeka ngolwazi lwesigaba, isibonelo ukuqapha ukusebenza kwethu ngokuqondene nesevisi ethile esiyinikezayo. Uma siwasebenzisa ngale njongo, wena njengomuntu ngeke ubonakale.
I-BESTFOREXEAS izoqhubeka nokucubungula lolu lwazi kuze kube yilapho inkontileka phakathi kwethu iphela noma ipheliswa yinoma iyiphi ingxenye ngaphansi kwemigomo yesivumelwano.
ULWAZI SENZISWA NOKWENZEKA KWAKHO
Ngezenzo ezithile uma kungenjalo akukho ubudlelwane obunesivumelwano phakathi kwethu, njengokuthi upheqa iwebhusayithi yethu noma usicela ukuba sikunikeze ulwazi oluthe xaxa mayelana nebhizinisi lethu, kufaka phakathi amathuba okuhweba nemikhiqizo namasevisi wethu, unikeza imvume yakho ukucubungula ulwazi okungaba ulwazi lomuntu siqu.
Uma kunokwenzeka, sihlose ukuthola imvume yakho ecacile yokucubungula lolu lwazi, isibonelo, ngokukucela ukuthi uvumelane nokusebenzisa kwethu amakhukhi.
Ngezinye izikhathi ungase unikeze imvume yakho ngokucacile, njengalapho usithumela umyalezo nge-imeyli ongayilindela ukuthi uphendule.
Ngaphandle kokuthi uvumelene nokusebenzisa kwethu ulwazi lwakho ngenjongo ethile, asisebenzisi ulwazi lwakho nganoma iyiphi indlela ezokukhomba wena uqobo. Singakuhlanganisa ngendlela ejwayelekile futhi siyisebenzise ukuhlinzeka ngolwazi lwesigaba, isibonelo ukuhlola ukusebenza kwekhasi elithile kwiwebsite yethu.
Uma usinikeze imvume ecacile yokwenza kanjalo, singase sidlulise igama lakho kanye nolwazi lokuthintana nabo kumalungu akhethiwe esiwacabangayo anganikeza amasevisi noma imikhiqizo ongayithola ewusizo.
I-BESTFOREXEAS iqhubeka nokucubungula ulwazi lwakho ngalesi sisekelo uze uhoxise imvume yakho noma kungacatshangwa ukuthi imvume yakho ayisekho.
Ungase uhoxise imvume yakho nganoma isiphi isikhathi ngokusiyala nge-imeyili ku- [Email protected]. Kodwa-ke, uma wenza kanjalo, ngeke ukwazi ukusebenzisa iwebhusayithi yethu noma amasevisi ethu ngaphezulu.
ULWAZI SISEBENZA IZINDLELA ZENHLOKO YOKUPHILA
I-BESTFOREXEAS ingacubungula ulwazi ngesisekelo kunesithakazelo esifanele, kungaba kuwe noma kithi, sokwenza kanjalo.
Lapho sicubungula ulwazi lwakho ngalesi sisekelo, senza emva kokucatshangisisa ngokucophelela:
kungakhathaliseki ukuthi inhloso efanayo ingafinyelelwa ngenye indlela
kungakhathaliseki ukucubungula (noma ukucubungula) kungabangela ukulimala
kungakhathaliseki ukuthi ungalindela ukuthi sicubungula idatha yakho, futhi ngabe ngabe, nxazonke, kubheka ukuthi kunengqondo ukwenza kanjalo
Isibonelo, singase sicubungula idatha yakho ngalesi sisekelo ngezinhloso ze:
ukugcinwa kwerekhodi ukuphathwa okufanele futhi okudingekile kwebhizinisi lethu
ukuphendula ekukhulumisaneni okungavunyelwe kusuka kuwe okukholelwa ukuthi ungalindela impendulo
ukuvikela nokuqinisekisa amalungelo omthetho kwanoma yiliphi iqembu
ukuqinisekiswa ngokumelene noma ukuthola iseluleko sochwepheshe okudingekayo ukuphatha ingozi yebhizinisi
ukuvikela izithakazelo zakho lapho sikholelwa ukuthi sinomsebenzi wokwenza kanjalo
ULWAZI SIPHUMELA NGOKUBA SINOKUBHALWA KOMTHETHO
Ama-BESTFOREXEAS ancike kumthetho njengawo wonke umuntu. Ngezinye izikhathi, kumele sicubungula ulwazi lwakho ukuze uhambisane nesibopho somthetho.
Isibonelo, kungase kudingeke ukuthi sinikeze ulwazi kumagunya omthetho uma becela noma ngabe banegunya elifanele njenge-warrant yokusesha noma umyalelo wenkantolo.
Lokhu kungafaka ulwazi lakho lomuntu siqu.
Ukusetshenziswa okucacile kolwazi osinikezelayo
ULWAZI LUKHULULEKILE NGOKUKHONA UKUTHI LOKWENZISWA NESIGABA SESITHATHU
Iwebhusayithi yethu ikuvumela ukuba uthumele ulwazi ngombono walelo lwazi olufundwayo, olukopishwa, olulandwayo, noma olusetshenziswa abanye abantu.
Ukuchofoza kusithonjana eduze komyalezo wesinye isivakashi ukuhambisa isivumelwano sakho, ukungavumelani noma ukubonga
Ekuthumeni ulwazi lomuntu siqu, kukuwe ukwaneliseka ngezinga lobumfihlo lalowo muntu ongayisebenzisa.
SISEBENZISA KANYE LOLWAZI NGOKUKHETHA UKUVUMELWA KANYE UKUFANELEKILE KANYE OKUHLELEKILE.
Siyigcine, futhi sinelungelo lokulisebenzisa esikhathini esizayo nganoma iyiphi indlela esinquma ngayo.
Uma imininingwane yakho ingena esizindeni somphakathi, asinakho ukulawula ngalokho umuntu ngamunye wesithathu angakwenza ngakho. Asamukeli umthwalo wemfanelo ngezenzo zabo nganoma yisiphi isikhathi.
Kunikezwe isicelo sakho sinengqondo futhi asikho isisekelo esingokomthetho sokuba silondoloze, ngakho ngokuqonda kwethu singavumelana nesicelo sakho sokususa imininingwane yomuntu oyithumele. Ungenza isicelo ngokuxhumana nathi nge-imeyili.
IZINGQUBO EZIKHUMANA NOKUQALA KUWEBSITE WETHU
Sizama ukunciphisa okuqukethwe okukhiqizwa ngumsebenzisi, kepha asikwazi njalo ukwenza lokho ngokushesha lapho lokho okuqukethwe kushicilelwe.
Uma ukhononda nganoma yikuphi okuqukethwe ku-website yethu, sizophenya isikhalazo sakho.
Uma sizizwa kulungile noma uma sikholwa ukuthi umthetho usenza ukuba senze kanjalo, sizosusa okuqukethwe ngenkathi siphenya.
Inkulumo yamahhala iyilungelo eliyisisekelo, ngakho-ke kufanele senze isahlulelo sokuthi ngubani ozovinjelwa ilungelo lakhe: owakho noma lomuntu othumele okuqukethwe okukucasulayo.
Uma sicabanga ukuthi isikhalazo sakho sinesidingo noma singasisekelo, ngeke sihambisane nawe ngakho.
ULWAZI OLUFANELEKILE KANYE NOKUTHANDA KWAKHO
Ukwaziswa kokukhokha akukaze kuthathwe kithi noma kudluliselwe kithi noma ngewebhu yethu noma ngenye indlela. Abasebenzi bethu kanye nabontonkontileka abasoze bakwazi ukufinyelela kuwo.
Ngesikhathi sokukhokha, udluliselwa ekhasini elondekile kwiwebhusayithi ye-World Pay / Sage Pay / PayPal / Moneybookers / Stripe noma omunye umhlinzeki wenkonzo yokukhokha ohloniphekile. Leli khasi lingabizwa ngokuthi libukeke njengekhasi kwiwebhusayithi yethu, kodwa ayilawulwa yilo.
UKUFUMA UMTJHUMO WETHU LETHU LOKUSEBENZA
Uma uxhumane nathi, kungaba ngocingo, ngokusebenzisa iwebhusayithi yethu noma nge-imeyili, siqoqa idatha osinike yona ukuze uphendule ngolwazi oludingayo.
Sibhala isicelo sakho kanye nempendulo yethu ukuze sikhulise ukusebenza kwebhizinisi lethu.
Sigcina ulwazi lomuntu siqu olubonakalayo oluhlotshaniswa nomlayezo wakho, njengegama lakho nekheli le-imeyili ukuze ukwazi ukulandelela ukuxhumana kwethu nawe ukuhlinzeka ngekhwalithi ephezulu.
Uma sithola isikhalazo, sibhala yonke imininingwane oyinike yona.
Sisebenzisa lolo lwazi ukuxazulula isikhalazo sakho.
Uma isikhalazo sakho sifuna ukuthi sixhumana nomunye umuntu, singanquma ukunikeza lowo muntu olunye ulwazi oluqukethwe kusikhalazo sakho. Lokhu sikwenza njalo ngangokunokwenzeka, kodwa kuyindaba yokwazi kwethu kuphela ukuthi ngabe sinikeza ulwazi, futhi uma senza, ukuthi yiluphi ulwazi.
Singase futhi sibuthe izibalo ezibonisa ulwazi olutholakala kulo mthombo ukuhlola izinga lensizakalo esiyinikezayo, kodwa hhayi ngendlela engakukhomba wena noma omunye umuntu.
UKUZIWA KWABASEBENZI NABASEBENZI
Lolu lwazi olunikezwe nguwe ngamandla akho njengobambiswano nathi noma njengomlingani webhizinisi.
Ivumela ukuthi siqaphele izivakashi ozikhulumile zona, futhi sikwemeze ukuthi uthumela ngenxa yokudluliselwa okunjalo. Kuhlanganisa ulwazi oluvumela ukuthi sidlulisele ikhomishini kuwe.
Ulwazi alusebenziswanga nanoma iyiphi enye injongo.
Senza ukugcina imfihlo yolwazi kanye nemigomo yobuhlobo bethu.
I-BESTFOREXEAS ilindele noma yimuphi umlingani noma umlingani ukuthi avumelane ukubuyisela le nqubomgomo.
UKUSETSHENZISWA KOLWAZI SIKHULUMA NGOKUBA NGEZINQUBO NJENGOBA UVELA IWEBSITE YETHU
Amakhukhi angamafayela wombhalo amancane abekwe kwi-hard drive yekhompyutha yakho yisiphequluli sakho sewebhu uma uvakashela noma iyiphi iwebhusayithi. Vumela imininingwane eqoqwe ekhasini elilodwa lewebhu ukuthi igcinwe kuze kudingeke ukuthi isetshenziswe kwenye, ivumela iwebhusayithi ukukunikeza okuhlangenwe nakho komuntu uqobo kanye nomnikazi wewebhusayithi nezibalo zokusebenzisa iwebhusayithi ukuze ithuthukiswe.
Amanye amakhukhi angahlala isikhathi esithile esichaziwe, njengosuku olulodwa noma uze uvale isiphequluli sakho. Ezinye zihlala njalo.
Isiphequluli sakho sewebhu kufanele sikuvumele ukuthi ususe noma yikuphi okukhethayo. Kufanele futhi ikuvumele ukuvimbela noma ukunciphisa ukusetshenziswa kwazo.
Iwebhusayithi yethu isebenzisa amakhukhi. Zibekwe yi-software esebenza kumaseva ethu, futhi nge-software eqhutshwa ngabanye abantu abasebenzisa izinsizakalo zethu.
Uma uqala ukuvakashela iwebhusayithi yethu, sikubuza ukuthi ngabe ufisa yini ukusebenzisa amakhukhi. Uma ukhetha ukungabamukeli, ngeke siwasebenzise ekuvakasheni kwakho ngaphandle kokurekhoda ukuthi awuvumelanga ukusetshenziswa kwabo nganoma iyiphi enye injongo.
Uma ukhetha ukungasebenzisi amakhukhi noma ukuvimbela ukusetshenziswa kwabo ngokusebenzisa izilungiselelo zesiphequluli sakho, ngeke ukwazi ukusebenzisa yonke imisebenzi yewebhusayithi yethu.
Sisebenzisa amakhukhi ngezindlela ezilandelayo:
Ukulandelela ukuthi usebenzisa kanjani iwebhusayithi yethu ye-BESTFOREXEAS
Ukurekhoda ukuthi ngabe ubonile imiyalezo ethize esiyibonayo kuwebhusayithi yethu
Ukugcina ungene ngemvume kusayithi lethu
Ukurekhoda izimpendulo zakho ezihlolweni kanye nemibuzo engosini yethu ngenkathi uziqedela
Ukurekhoda intambo yengxoxo phakathi nengxoxo ebukhoma neqembu lethu lokusekela
ABANTU ABANTU ABAKHONA KUSUKELA NGOKUSEBENZA KWAKHO
Izicelo zesiphequluli sakho sewebhu kuya kumaseva ethu kumakhasi ewebhu kanye nokunye okuqukethwe kwiwebsite yethu kubhaliwe.
Sibhala ulwazi olufana nendawo yakho, umhlinzeki wakho we-inthanethi kanye nekheli lakho le-IP. Siphinde sibhale ulwazi mayelana nesofthiwe oyisebenzisayo ukuze upheqa iwebhusayithi yethu, njengokuthi ikhompyutha noma idivayisi kanye nesinqumo sesithombe.
Sisebenzisa lolu lwazi ngokubanzi ukuhlola ukuthandwa kwamakhasi ewebhu kuwebhusayithi yethu nokuthi senza kanjani ekunikezeni okuqukethwe kuwe.
Uma kuhlangene nolunye ulwazi esilwazi ngawe kusuka ekuhambeleni kwangaphambilini, idatha kungenzeka ukuthi ingasetshenziswa ukukhomba wena ngokwakho, ngisho noma ungangeni ngemvume kuwebhusayithi yethu.
UKUSETSHENZISWA KWETHU LOKWENZA UKUQALA
Ukumaketha kabusha kuhilela ukubeka ikhukhi kukhompyutheni yakho uma upheqa iwebhusayithi yethu ukuze ukwazi ukukunikeza isikhangiso semikhiqizo noma amasevisi wethu uma uvakashela enye ingosiwebhusayithi.
Singasebenzisa umuntu wesithathu ukuthi asinikeze ngamasevisi wokuvuselela ngezikhathi ezithile. Uma kunjalo, uma ngabe uvumile ukusetshenziswa kwethu kwamakhukhi, ungabona izikhangiso zemikhiqizo namasevisi kwamanye amawebhusayithi.
UKUFANELELA NOKUKHALWA KWENKCAZELO YAKHO
Ulwazi esiluthola kubantu besithathu
Nakuba singabonakali ulwazi lwakho lomuntu siqu kunoma yimuphi umuntu wesithathu (ngaphandle kwabekiwe kulesi saziso), ngezinye izikhathi sithola idatha engaqondwanga ngokuqondile emininingwaneni yakho evela kubantu besithathu abasebenzisa amasevisi.
Ayikho imininingwane enjalo ebonakalayo kuwe.
ISAHLUKO SESITHATHU SOKUTHUTHUKISA KUWEBSITE WETHU
Amaqembu wesithathu angakhangisa kwi-website yethu. Ngokwenza kanjalo, lawo maqembu, ama-agent noma ezinye izinkampani ezisebenzelayo zingasebenzisa ubuchwepheshe obuqoqa ngokuzenzakalelayo ulwazi mayelana nawe uma isikhangiso sabo siboniswa kuwebhusayithi yethu.
I-BESTFOREXEAS ayinakho ukulawula phezu kwalabu buchwepheshe noma idatha ukuthi la maqembu athola. Ngakho-ke, lesi saziso sobumfihlo asikufihli imikhuba yolwazi kulaba bantu abathintekayo.
IMINININGWANE YAKHO YENZISWA NGAPHANDLE NENYONZO YASE-EUROPE
Amawebhusayithi ethu abanjwe e-United States of America.
Singasebenzisa nezinsizakalo ezithunyelwe ngaphandle emazweni angaphandle kwe-European Union ngezikhathi ezithile kwezinye izici zebhizinisi lethu.
Ngakho idatha etholakala ngaphakathi kwe-US, UK noma enye izwe ingacubungulwa ngaphandle kwe-European Union.
Isibonelo, enye isofthiwe yethu ukusetshenziswa kwewebhu ingase ithuthukiswe e-United States of America noma e-Australia.
UKUFINYELELA ULWAZI OLWAWE
Ukufinyelela kolwazi lwakho lomuntu siqu:
Noma kunini ungahlola noma ubuyekeze ulwazi lomuntu siqu olubonakalayo esilubambe ngawe, ngokungena ngemvume kwi-akhawunti yakho kuwebhusayithi yethu.
Ukuthola ikhophi yanoma yiluphi ulwazi olungahlinzekiwe kuwebhusayithi yethu ungasithumela isicelo nge-imeyili.
Ngemuva kokuthola isicelo, sizokutshela uma silindele ukukunikeza ulwazi, nokuthi ngabe sidinga noma iyiphi imali yokukunikeza yona.
UKUSUSWA KWENKCAZELO YAKHO
Uma ufisa ukuba sisuse ulwazi lomuntu siqu olubonakalayo kusuka kuwebhusayithi yethu, ungathintana nathi nge-imeyili.
Lokhu kunganciphisa isevisi esingakunika yona.
UKWENZISWA KWENKCAZELO YAKHO
Uma sithola noma yisiphi isicelo sokufinyelela, shintsha noma susa ulwazi olubonakalayo lomuntu siqu sizoqala ukuthatha izinyathelo ezifanele ukuqinisekisa ubuwena ngaphambi kokunika ukufinyelela noma ukuthatha noma yisiphi isenzo. Lokhu kubalulekile ukulondoloza ulwazi lwakho.
UKUSEBENZISWA KWE-SITE BY CHILDREN
I-BESTFOREXEAS ayithengisi imikhiqizo noma inikeze ngezinsizakalo zokuthengwa ngezingane, futhi asidayisi izingane.
Uma ungaphansi kwe-18, ungasebenzisa iwebhusayithi yethu kuphela ngemvume evela kumzali noma umlondolozi.
UKUQHUBEKA KWEMINININGWANE YEZIDINGA NGAPHAKATHI US
I-BESTFOREXEAS isebenzisa izitifiketi ze-Secure Sockets Layer (SSL) ukuqinisekisa ukuthi ungubani kwisiphequluli sakho futhi ukubhala noma iyiphi idatha osinike yona.
Uma ngabe ulwazi ludluliselwa phakathi kwethu, ungabheka ukuthi lwenziwa ngakho-ke usebenzisa i-SSL ngokubheka uphawu oluvaliwe lwe-padlock noma olunye uphawu lokubheka kwibha ye-URL yesiphequluli noma ibha yamathuluzi.
INDLELA ONGAKHOZA NGAYO
Uma ungajabuli nale nqubomgomo yobumfihlo noma uma kukhona izikhalazo ungaxhumana nathi nge-imeyili.
Uma ingxabano ingaxazululwa ngakho-ke siyathemba ukuthi uzovuma ukuzama ukuxazululwa ngokuhlanganyela ngokukholwa nathi enkambisweni yokuxazululwa noma yokubambisana.
Uma ungagculiseki nganoma iyiphi indlela ukuthi silwenza kanjani lolu lwazi lwakho, unelungelo lokufaka isikhalazo eHhovisi Lekhomishini Yezokwazisa.
ISIKHATHI SOKUQALA KWAMANININGWANE YABANTU
Ngaphandle kokuthi kuboniswe ngenye indlela kulesi saziso sobumfihlo, sigcina imininingwane yakho kuphela uma nje sidinga ngathi:
Ukukunikeza ngezinsizakalo ozicelile;
Ukuhambisana neminye imithetho, kufaka phakathi isikhathi esifunwa yiziphathimandla zethu zentela;
Ukusekela isimangalo noma ukuzivikela enkantolo.
Inqubomgomo yethu yobumfihlo ihlanganiswe ukuze ihambisane nomthetho wezwe lonke noma igunya lomthetho esiluhlose ukwenza ibhizinisi. Uma ucabanga ukuthi ehluleka ukwanelisa umthetho wegunya lakho, kufanele sithanda ukuzwa kuwe.
Noma kunjalo, ekugcineni kuyisinqumo sakho sokuthi ufuna ukusebenzisa iwebhusayithi yethu ye-BESTFOREXEAS.
Ukubukezwa / ukulungiswa kwalo Mthetho-mthetho
I-BESTFOREXEAS ingabuyekeza lesi saziso sobumfihlo ngezikhathi ezithile uma kudingeka. Imigomo efakazela kuwe yilabo abathunyelwe lapha kuwebhusayithi yethu ngosuku osebenzisa ngayo iwebhusayithi yethu. Sikukwazisa kuphela ukuphrinta ikhophi yamarekhodi akho.
Uma unemibuzo mayelana nenqubomgomo yethu yobumfihlo, sicela uxhumane nathi.